कोरियामा बस्ने मनिष नागरिकता बनाउन नेपाल आए, सिधै राष्ट्रिय टिममा पर्दै डेब्युमै गरे गोल । – Yuwa Aawaj
कोरियामा बस्ने मनिष नागरिकता बनाउन नेपाल आए, सिधै राष्ट्रिय टिममा पर्दै डेब्युमै गरे गोल ।
जेठ १८, २०७८ मंगलबार 239
काठमाडाैं : इराकविरु’द्धकाे अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री’पूर्ण खेलमामार्फत् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टाेलीमा डेब्यू गरेका मनिष डाँगीले नयाँ अनुभव मिलेकाे बताएका छन्।
शनिबार इराकविरु’द्धकाे अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल घरेलु टिमसँग ६-२ गाेल अन्तरले परा’जित भएकाे छ। इराकलाई जित दिलाउन अयमन हुसेन गबधनले दुई गोल गरे। यस्तै, कप्तान अला अब्दुल जहर खासिन, मोहमद अब्दुल्जारा
ओबेद, मोहमद अलि अलसम्मारी र सज्जाद जसिमले एक/एक गोल थपे। नेपालका मनिष डाँगीले एक गोल फर्काए भने इराकका अहमेद इब्राहिम खलाफले एक गाेल उपहार दिएका थिए। खेलको २९ औं मिनेटमा मनिषले गाेल गरेका थिए। ‘खेल राम्रो भयो।
हामीभन्दा माथिला स्तरका खेलाडी थिए। रिजल्ट राम्रो नभएपनि अनुभव लिन पाएँ,’ उनले भने। यद्यपि, डेब्यू खेलमै गरेको गोल गर्दा भने आफूलाई खुशी लागेकाे उनले बताए।
‘डेब्यूमै गोल गर्दा खुशी छु। तर, नजिता राम्रो आउन सकेन। त्यसैले दु:ख पनि लागि रहेको छ,’ उनले भने। कोरियामा बस्दै आएका मनिष नेपालबाट उमेर समूहमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। यद्यपि, सिनियर टोलीबाट भने इराकवि’रुद्ध खेल नै डेब्यू हाे।
उनले केही समय अगाडि सम्पन्न भएकाे नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)मा विराटनगर सिटी एफसीबाट खेलेका थिए।
उक्त लिगमा उनले गरेकाे प्रदर्शनकाे आधारमा प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले सिधै राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा बोलाइएका हुन्।
मनिष पहिलो पटक टोलीमा स्थान बनाउँदै पहिलो खेलको सुरुवाती एघारमै अटाएका थिए। उनी दाेस्राे हाफमा मैदान बाहिर निस्केका थिए। उनले अझै भविष्यमा मेहनत गरेर राम्रो गर्न गर्न चाहेकाे बताएका छन्।
मनिस डाँगी (मिडफिल्डर)
मनिष डाँगीले केही समय अगाडि सम्पन्न भएकाे नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)मा विराटनगर सिटी एफसीबाट खेलेका थिए। दक्षिण कोरियामा खेल्दै चर्चा कमाएका उनले यसअघि सी डिभिजन लिग खेलेका थिए भने नेपालमा भएको साफ यू-१८ च्याम्पियनसमेत खेलेका थिए ।
विराटनगरले उनलाई हिँड्न ट्यालेन्टको रुपमा टिममा अनुबन्ध गरेको थियो र उनले मैदानमा पनि त्यही खालको प्रदर्शन देखाए । उनले एनएसएलमा विराटनगरका लागि लिगका सबै ६ खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गर्दै खेलेका थिए ।
पहिलो रोजाईमा पर्न नसकेपनि उनले अवसर पाउँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनी अट्याकमा जुनसुकै पोजिसनमा समेत खेल्छन् भने बढी जसो विंगरको भूमिकामा खेल्छन् ।
उनले यसअघि खालीबारी फुटबल क्लबका लागि सी डिभिजन लिग खेलेका थिए र त्यहीबाट उनको चर्चा बढेको थियो । दक्षिण कोरियामा बस्दै आएका उनी नेपालमा नागरिकता बनाउन आएका बेला सी डिभिजन लिग खेलेका थिए । -ताजा खबर टिभि
Prevमलेसियामा आजदेखि देशव्यापी लक-डाउन,ताला-बन्दी सुरु ।
Nextको’रोना जितेर अस्प’तालबाट घर फर्किए खरेल ।
नारीलाई भुतुक्कै पार्ने पुरुषमा हुनुपर्ने ११ गुणहरु थाहा पाउनुहोस ।
मधुमेहका बिरामीले कसरी प्रयोग गर्ने करेला ? प्रयोग गर्न नजाने यती धेरै खत’रा…हेर्नुहोस् ।
स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकालाई २५ लाख ऋण उपलब्ध गराइने ।
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14847)
१. यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14847)
२. आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पु’र्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठे’रो छ, नलडी जानु है ! (3197)
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2153)
४. खुशीको खबर : दुबई र मलेसिया सहित यी ५ देशमा हवाई उडान अनुमति । (1629)
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1086)
८. माउन्ट भ्यू इंगलिस स्कूलका सस्थापक प्रिन्सिपल राजकुमार महर्जनको नि’धन ! (1064)